को हुन् ती डाक्टर जसले शक्तिशाली भूकम्पमा पनि बि’रामीको अ’प्रेशन गरिरहे ? – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन ०६, २०७८ समय: १६:२४:४१
दक्षिणपूर्वी अस्ट्रेलियामा ५.८ म्याग्निट्यूडको एउटा भूकम्प मापन गरिएको छ । भूकम्पका कारण मेल्बर्न सहरमा भवनहरू भ’त्किएका छन्।स्थानीय समयानुसार बुधवार बिहान ९:१५ बजे म्यान्सफील्डमा केन्द्रबिन्दु बनाएर उक्त भूकम्प गएको हो । उक्त स्थान भिक्टोरिया राज्यको राजधानी नजिकै छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले कोही पनि ग’म्भीर घा’इते भएको विवरण प्राप्त नहुनु सुखद समाचार भएको बताएका छन्।
भूकम्पको ध’क्का छिमेकी साउथ अस्ट्रेलिया र न्यू साउथ वेल्स राज्यमा पनि महसुस गरिएको थियो। उक्त भूकम्पपछि दुइटा साना परकम्प पनि गएका छन्। केही वर्षयता अस्ट्रेलियामा आएको यो सबैभन्दा ठूलोमध्येको भूकम्प हो। तर, त्यसबाट खासै ठूलो क्ष’ति भएको जस्तो देखिँदैन।
अमेरिकाबाट बोल्दै प्रधानमन्त्री मरिसनले अस्ट्रेलियाका लागि भूकम्प असामान्य भएकाले ‘निकै अ’शान्तिकारक घटना’ हुनसक्ने बताएका छन्। भिक्टोरिया राज्यको आ’पत्कालीन सेवाले सर्वसाधारण मानिसलाई सम्भावित परकम्पप्रति चना’खो रहन आग्रह गरेको छ।
‘तपाईँ भि’क्टोरियामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ जो’खिममा हुनुहुन्छ। परकम्पहरू जान सक्छन्, त्यसैले क्ष’तिग्रस्त भवन र अन्य ख’तराबाट परै बस्नुहोस्। अत्यावश्यक हुँदाबाहेक स’वारी नचलाउनुहोस्,’ उसले भनेको छ।
मुटुको श’क्यक्रिया गर्दागर्दै भूकम्प-डा. समीर ठाकुरका अनुसार भूकम्प जाँदा उनी मेल्बर्ननजिकै एउटा अस्पतालमा बि’रामीको मुटुको बा’ईपास श’ल्यक्रिया गर्दै थिए। ‘हामी श’ल्यक्रियाको भाग कामतिर थियौँ अनि हामीले श’ल्यक्रिया गर्ने टेबल चलेको महसुस गर्‍यौँ,’ उनले बीबीसी न्यूजडेसित भने।
‘कक्षमा यताउता हेर्दै आ’ईभी पोलहरू चलिरहेका थिए अनि हामीसँग भएका क्ल्या’म्पहरू पनि ह’ल्लिरहेका थिए।’ भाग्यवश कम्पन न’रोकिँदासम्म श’ल्यक्रिया रो’क्न सकिने चरणमा भएको र त्यसपछि श’ल्यक्रिया सम्पन्न गरिएको उनले बताए।
Last Updated on: September 22nd, 2021 at 4:24 pm